Oral Turinabol (Oral Tbol) powder (2446-23-3) ≥98% | PUTA yakatsvaga
/ Products / Anabolics Steroids / Testosterone powder Series / Oral Turinabol (Oral Tbol) powder
SKU: 2446-23-3. Categories: Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutachire hweOral Turinabol (Oral Tbol) powder (2446-23-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Oral Turinabol (Oral Tbol) powder Basic Characters
Name: Oral Turinabol (Oral Tbol) powder
Color: Kuvhenekera mhepo yakachena
Oral Turinabol (Oral Tbol) kushandiswa kweupfu mu steroidji
Muchidimbu Tbol powder (Oral Turinabol powder) Mazita
Oral Turinabol powder inonziwo Oral Tbol powder (CAS 2446-23-3), OT, nezvimwewo.
Muchidimbu Tbol powder (Oral Turinabol powder) Kushandiswa
Nhengo yemutauro turinabol inowanzoshandiswa mumuromo. Kwemurume, kazhinji 15mg-40mg pazuva, kwete kupfuura mavhiki e8; Kukadzi, kazhinji 2.5-5mg pazuva, hausi mavhiki e6.
MUTAURO T-BOL yakagadzirwa pakutevera danabol. Muchirevo chemumuromo chinobvumira kukura kukuru pasina kukonzera mvura kuchengetedza se danabol. Chiito chayo chinononoka zvishomanana asi kuwanikwa kunogara kwakasimba. Izvi zvinogadzirwa nevanabolic zvakasiyana-siyana kuti zvigadzire kugadzirwa kwemhuka ye testosterone, iyo inoshandiswa nemushandi kumagumo ekurapwa ane chiyero chapamusoro chehupfu hwemhuka. Chirongwa chekuenderera mberi nekukudziridza masimba ake munguva refu.
Chlorodehydromethyltestosterone, zita rinowanzozivikanwa rwezita rinonzi Oral Turinabol, rinobva kune Dianabol. Iyi steroid yemuromo inogadzira muchinjikwa pakati pemametandrostenolone uye clostebol (4-chlorotestosterone), ine chigadziro chakafanana se Dianabol pamwe nekuwedzera 4-chloro kuchinja kwe clostebol. Iko kushandura kunoita chlorodehydromethyltestosterone muzukuru wakaoma wa Dianabol, steroid itsva isina kuratidza kwete estrogenic uye basa rakanyanya uyerorogenic pakuenzanisa nemumwe wavo anozivikanwa zvikuru. Iyo vanabolic basa re chlorodehydromethyltestosterone yakaderera kupfuura iya ya Dianabol pamwe chete, asi inoramba iine huwandu hwakanaka hwevanabolic kune androgenic effect. Izvi zvinoreva kuti pane chero hupi hwehupi hwemabasa ekuvaka musimba, chlorodehydromethyltestosterone haichazove yakakwanisa kubudisa uyerogenic madhara.
Chirwere chechirwere chinowanzoitwa Oral Turinabol inofungidzirwa kuva 5 mg pazuva; kunyatsorondedzera mazano hazviwanikwi. Munhandare yemitambo, miitiro inoshanda yemazuva ose inowira muhuwandu hwe15-40 mg, inotorwa mumakumbo asingagumi kupfuura mavhiki 6-8 kuti kuderedza hepatotoxicity. Izvi zvinokwana kuwedzerwa kunogona kuwedzera mumuviri masimba uye simba. Uyu mujeri anowanzoshandiswa sepamberi kumakwikwi kana kutema steroid yezvinangwa zvekuvaka muviri, uye haisi kuonekwa senhengo yakakosha yekunyora nekuda kwekushaiwa kwayo yesrogenicity. Vatambi vari mumitambo iyo inokurumidza kuva inonyanya kutarisa inowana nyasha yakasimba mu chlorodehydromethyltestosterone, kuwana yakasimba anabolic kubatsirwa pasina kutakura kumativi ose emvura kana mamwe mashoma.
Kushandiswa Kwevarume Vakadzi
Chirwere chechirwere cheOral Turinabol inofungidzirwa kuva 1-2.5 mg pazuva; kunyatsorondedzera mazano hazviwanikwi. Munhandare yemitambo, vakadzi vaiwanzotora imwe 5 mg tablet patsika, vachitorwa mumagariro asingagumi kupfuura mavhiki 4-6 kuti kuderedza hepatotoxicity. Zviratidzo zvinokonzera hazvibviri pane iyi yero yekushandiswa. Zvikwereti zvakanyanya zvakanyanya zvaiwanzoshandiswa nevatambi vechikadzi munguva yekare yeGDR doping purogiramu, asi kazhinji kunokonzera kusimba kwakasimba kwemigumisiro.
Iyo hafu-hupenyu mumabhuku esayenzi mushure mekunge IV inotungamira ndeye 16 maawa; kunyange zvakadaro, hafu yehupenyu-inenge isiri iyochete1. Kazhinji hafu yeupenyu yekutaura kwemuromo yakareba kupfuura iyo yehutungamiri hwe IV, zvisinei, munyaya iyi inogona kunge ichingopfupika nemhaka yekutanga kudarika metabolism uye kuderedzwa kwepamusoro kwema plasma maenzanisi neiyo IV dose1. Rimwe pepa rinoratidza kuti hafu yehafu-life2. Kuongororwa kwakanaka kwemaawa masere masere kwehafu yehupenyu ye steroid iyi pamwe nekuda kwechokwadi pakati pe12 nemaawa 20. Ichokwadi kuti metabolites ye steroid ino inogona kuonekwa kwenguva refu mushure mekupera kunotora kwenguva refu yeupenyu3.
Vashandi varondedzera zvakasimba kudzvinyirirwa kwemashoko ezviko zve testosterone pavanenge vachishandisa Oral Turinabol. Iyi steroid ine chiropa inotyisa asi inogona kunge yakanyanyisa kudarika cheyero yakakwana ye methandrostenolone. Iyi steroid inonyatsozivikanwa nokuda kwebasa rayo muhurumende inotsigirwa doping purogiramu yekare yaimbova East German Olympic doping program. Iyi mishonga yakapiwa kuvarwi vevarume nevadzimai kunyanya kuwedzera mitambo mumitambo yeOlympics. Kunyange zvazvo varume vaibatwawo, vakadzi ndivo vainyanya kukoshesa nokuti vakagadzikana zviri nani pane kurapwa. Maitiro e10 chete ku 20 mg pazuva anobudiswa kuwedzera kwekuita kwevakadzi. Iyi purogiramu yakaisawo mamwe mishonga yakadai se mestanolone, 11-beta hydroxy fomu yeOrmal Turinabol, 4-chloro-methyltestosterone, 4-chloro-mestanolone, methandrostenolone, testosterone uye nandrolone esters pamwe nezvimwe zvinokurudzira uye mahomoni epeptide. Kunyange zvakadaro, Oral Turinabol ndiyo yaitarira nokuti yakaita seyokuratidza mhinduro dzakanakisisa4.
Oral Turinabol yakaratidza mumakore achangopfuura mumusika wekupedzisira nevanhu vanoshandisa zvinopfuura 100 mg pazuva. Pamusana uyu, munhu anofanirwa kushamisika kana chigadzirwa chacho chine steroid yakarurama kana iri pasi pedenga kana ichingova imwe yenyaya ye "zviri nani zviri nani".
Yambiro pamusoro pevhu rakaiswa Tbol powder (CAS 2446-23-3)
Iyo migumisiro yeOral Turinabol ndeimwe yezvinyoro zvayo chero sinaidhiyo steroid pasi pano. Zvisinei, tichawanawo kuti inogona kunge ine simba, risina kunaka pahutano hwemwoyo. Izvi zvinofanira kunge zvichigadziriswa kune munhu mukuru akwegura asi zvichava chimwe chinhu chaunoda kuti urambe wakatarisa. Varume nevakadzi vose vachakwanisa kushandisa steroid iyi.
Kunyange zvazvo chlorodehydromethyltestosterone inorondedzerwa seanabolic steroid, uye androgenic nemigumisiro inogona kuitika neiyo chinhu. Izvi zvinogona kusanganisira zvipembenene zvehuni, mafuta, uye muviri / bvudzi bvudzi kukura. Manyore akakwirira kudarika zvinowanzotaurwa anowanzokonzera migumisiro yakadaro. Anabolic / androgenic steroid inogonawo kuwedzera kukanganiswa kwebvudzi revarume. Vakadzi vanowanzonyeverwa nezvehutano hwakakosha hunoitika hwevanabolic / androgenic steroids. Izvi zvinogona kusanganisira kuwedzera kwezwi, kusara kwemwedzi, kushanduka kweganda, kushivirira bvudzi, nekugadzirisa. Chlorodehydromethyltestosterone haisati yakanyatsorodzwa ne-5-alpha reductase enzyme, saka iyo yakafanana uyerogenicity haina kunyanya kushandiswa nekushandiswa kamwechete kwema finasterid kana dutasteride
Nhengo Dzakashata (Hepatotoxicity)
Chlorodehydromethyltestosterone inonzi c17-alpha alkylated compound. Iko kushandura kunodzivirira chirwere ichi kubva pakuchenesa nechiropa, zvichibvumira zvakanyanya kuwandisa kwechirongwa chechirwere muropa rinotevera kushandiswa kwemuromo. C17-alpha alkylated anabolic / androgenic steroid inogona kuva hepatotoxic. Kugara kwenguva yakareba kana kukwirira kunogona kukonzera kuora kwechiropa. Muzviitiko zvisingaoneki kutyisa kwehupenyu kunogona kukura. Zvinokurudzirwa kushanyira chiremba periodically panguva imwe neimwe kurongedza kuongorora chiropa chinoshanda uye hutano hwakakwana. Kuwana kwe-c17-alpha alkylated steroid inowanzosara kumasvondo e6-8, mukuedza kudzivisa kukura kwechiropa. Kushandiswa kwechiropa detoxification kunowedzera zvakadai seLiver Stabil, Liv-52, kana Essentiale Forte inorayirirwa paunotora chero hepatotoxic anabolic / androgenic steroids.
Nzira Dzakashata (Mwoyo Mwoyo)
Anabolic / androgenic steroid inogona kuva nehutano hwakanyanya pane serum cholesterol. Izvi zvinosanganisira maitiro ekuderedza HDL (yakanaka) cholesterol mararamiro uye kuwedzera LDL (yakaipa) cholesterol mararamiro, ayo anogona kuchinja HDL kusvika kuLDL muyeri munharaunda inowedzera dambudziko guru re arteriosclerosis. Izvo zvinokonzerwa nevanabolic / androgenic steroid pane serum lipids inobva pane chirwere, nzira yehutungamiri (muromo vs. injectable), rudzi rwe steroid (inogadziriswa kana kuti isinganzwisisiki), uye chiyero chekudzivirira hupatic metabolism. Chlorodehydromethyltestosterone ine simba rakasimba pahutano hwekutengesa cholesterol pamusana pezvisizvo zvisingasviki, chimiro chekudzivirira kushaya kwechiropa, uye nzira yekutungamirira. Anabolic / androgenic steroid inogonawo kukanganisa kukanda ropa uye triglycerides, kuderedza kupedzisiralial relaxation, uye kutsigira kwakasara ventricular hypertrophy, zvose zvinogona kuwedzera ngozi yehutano hwepfungwa uye myocardial infarction.
Kuti ubatsire kuderedza kushushikana kwemwoyo kunorayirwa kuti urambe uine hutano hwehutano hwehutano hweprogram uye kuderedza kudya kwemafuta akazara, cholesterol, uye ma carbohydrates aripo nguva dzose munguva yekushanda kweAAS inoshanda. Kuwedzera nemafuta ehove (4 gramu pazuva) uye yakasikwa cholesterol / antioxidant fomu yakadai sePidid Stabil kana chigadzirwa chakafanana nemishonga inokurudzirwa zvakare.
Nzira Dzakashata (Testosterone Kuchengeta)
Zvose anabolic / androgenic steroid kana inotorwa mumatokari akakwana kuti kukurudzira kuwanikwa kwemaviri kunotarisirwa kupedza simba rekuberekwa kwe testosterone. Pasina kupindira kwezvinhu zvinokonzera testosterone-stimulating, maitiro e testosterone anofanira kudzokera kune anorarama mukati meZ1-4 mwedzi yehutano hwemishonga. Cherechedza kuti nguva refu hypogonadotrophic hypogonadism inogona kukura yechipiri kune steroid kushungurudzwa, zvichida kubatsirwa kwezvechiremba.
Oral Tbol powder Zvimwe mirayiridzo
Pasina mubvunzo migumisiro yeOrmal Turinabol ichave yakakosha kune mutambi uye nemutambi watinonyatsoreva mutambi. Hatisi kutaura nezvemugadziri wemiti kana gym rat inorarama semumwe chete asi pane mumwe munhu anokwikwidzana mumakwikwi emakwikwi emhizha. Kushandiswa kweOral Turinabol kuchakurudzira zvakanyanya musimba kutsungirira, havazoperi nekukurumidza uye muzinga wavo wekugadzirisa unofanirwa kuvandudzwa zvikuru.
Nzira yekutenga Oral turinabol powder (CAS 2446-23-3); Tenga Mutemo Tbol powder kubva kuAASraw
KUNYANYA kunopa hutano 99% Oral turinabol poda yakasvibirira kuti vashandi vemuviri kana kuti pasi pasi mabhii anoshandiswa mumuromo.
KUNYORWA KWECHOKWADI (SHAKE PASI POSE POSE)
1ML inopisa mvura yakachena
43ML mvura yakasvibiswa
nhengo dzichabatanidzawo pane izvi:
2.5grams powder (winny, anavar, dbol, OT, nezvimwewo)